Sirdoonka UK Kama aysan quusan soo qabashada Garoobta Cad ee ku biirtay Al-Shabaab.
Sirdoonka Ingiriiska ayaa baadi-goob xooggan ugu jiro sidii uu u guuleysan lahaa howlgalka lagu bartilmaameedsanayo Haweeneyda Carmaladda Cad oo loo yaqaan Samantha Louise Lewthwaite.
Seygeeda ayaa ka dambeeyay qarax ka dhacay Magaalada London 7-July-2005-tii, wixii ka dambeysay baxsad ayay ahayd si aan wax looga weydiin xogta ninkeeda iyo dabagalka oo suuragal ah in xabsi waqti dheer loo taxaabo.
Waxa ay katirsan tahay Al-Shabaab, Soomaaliya ayay joogtaa sida dabagalo iyo xog soo gudbin marar badan ay soo bandhigeen sirdoonka Boqortooyada Britain oo raad-raadinteeda waqti iyo lacagba u huray.
Da’deedu waa 36-sano, Lewthwaite, waxa ay cudud ku heysataa Al-Shabaab oo ah xubin hoostagta Al-Qaacida oo ay katirsan tahay, waana tan keentay in ay baaqi kusii ahaato Soomaaliya.
Wargeyska National Post ee Canada laga leeyahay ayaa qoray xogta raadinta Haweeneydaan, isaga oo caddeymo iyo warbixinada kasoo qaatay shabakadda Netflix ee laga leeyahay dalka Mareykanka.
Waxaa kasoo muuqday xogta shabakadda ay baahisay Dumar badan oo loo heysto in Ragga qaba ay ku lug leeyihiin dambiyo kala duwan oo sabab u noqday in ay iyagana ay ku dhacaan fal dambiyeedyo kale.
Haweeneydaan ayaa inta ay katirsan tahay Al-Shabaab waxa ay geysteen weeraro waa weyn oo ka dhacay meelo ka baxsan Soomaaliya, waxaana lagu tuhmayaa in ay ku lug leedahay, si gaar ah Maqaayad ku taalla Magaalada Mombasa 2012-kii, Weerarkii Al-Shabaab ee Suuqa Westgate 2013-kii oo ay ku dhinteen 68-ruux, kadib markii koox hubeysan gudaha ay u galeen suuqaas saacado badan halkaas ay ka dagaalamayeen.
Goobjoogayaal ku jiray macluumaadka ayaa sheegay in haweeneydaan kasoo muuqatay Suuqa Westgate, taasi waxa ay sii xoojisay shakiga laga qabay in ay qayb ka tahay maskaxda weerarkaas.
Sidoo kale xogta ayaa sheegeysa in Carmaladda Cad ay heysato Baasaboor Koofur Afrikaan ah oo Been abuur ah, dadka qaar waxa ay isugu sheegtaa in ay tahay ganacsato, waxa ay isaga kala gudubtay Xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Sida uu diiwaangeliyay Radio Times, Haweeneydaan waxa ay asal ahaan ku dhalatay Waqooyiga Ireland 1993-dii, kahor inta aysan u guurin Magaalada Suuqleyda Aylesbury dalka Ingiriiska, waxa ay wax ku baratay Jaamacadda London, balse ma aysan dhameysan qaybta Siyaasiyadda iyo diinta oo ay baraneysay.
Waa ay muslimtay iyada oo jirto 17-sano, kadib waxa ay guursatay Ninkii ka dambeeyay qaraxii ka dhacay Magaalada London oo lagu magacaabo Lindsay sida uu wariyay Radio Times 2002-dii, markale ayay guursatay Nin katirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Maalin Ibraahim waa sida uu tabiyay Radio Times.
Sirdoonka Ingiriiska oo dhaqaalaha badan ku bixiyay doon-doonista Haweeneydaan iyo raadinta xogteeda waxa ay sheegeen in aysan ka hari doonin ilaa inta ay sheegeen in sharciga laga horgeynayo.